Abey Axmed: Diyaar ayaan u nahay dagaal si aan u difaacno biya xireenka An-Nahda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Abey Axmed: Diyaar ayaan u nahay dagaal si aan u difaacno biya xireenka An-Nahda.
Last updated Oct 22, 2019 453 0
Ra’iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ninka lagu magacaabo Abey Axmed ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay dagaal uu la galo wadanka Masar, si loo difaaco buu yiri biya xireenka khilaafka dhaliyay ee An-Nahda.
Abey Axmed oo hadal ka jeedinayay fadhi ay isugu yimaadeen baarlamaanka wadanka Itoobiya ayaa si aan ka leex leexad lahayn wuxuu u sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay dagaal ka dhan ah wadanka Masar oo ay kala dhexeyso khilaafaad salka ku haya biya xireenka Itoobiyaanku ka dhisayana webiga An-niil.
Isagoo ka jawaabayay su’aallo ku aadan biya xireenka An-Nahda ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed “Itoobiya waxay sii wadi doontaa dhisida biya xireenka An-nahda, inagoo aan waxba kasoo qaadeynin caga jugleynta milliteri iyo walaaca ay muujineyso Masar” ayuu yiri Abey Axmed.
Wuxuu intaa sii raaciyay ” haddii ay dantu keento dagaal ka dhan ah Masar, oo ku aadan biya xireenka An-Nada, diyaar ayaan u nahay in malaayiin ciidamo aan ku gurno dagaalkaas” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo hadalkiisa goodiska ah sii wata, islamarkaana ay cara xoogan ka muuqaneyso ayaa intaa ku daray ineysan jirin awood dowladda Itoobiya ka hor istaagi karta sii wadista dhismaha biya xireenka An-nahda, wuxuuna sheegay in haddii Masar ay isticmaasho gantaal, ay iyaguna adeegsan doonaan Nuclear.
Mashruuca biya xireenka An-Nahda ee sanadihii lasoo dhaafay dowladda Itoobiya ka dhiseyso webiga An-Niil ayuu ku tilmaamay Abey Axmed inuu yahay mid wanaagsan, oo aan gorgortan laga geli doonin, halkiisana kasii socon doona.
Hadalkan hanjabaada ah ee uu jeediyay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed ayaa kusoo aadaya iyadoo lagu wado in saacadaha soo socda uu magaalada Sootshi ee dalka Ruushka kula kulmo madaxweynaha dowladda Masar Cabdil-Fataax As-siisi.
Waxay sidoo kale hanjabaada Abey Axmed kusoo aadeysaa, iyadoo dhawaan dowladda Masar ay shaaca ka qaaday iney fashilmeen wadahadallo ay kula jireen dowladda Itoobiya oo lagu doonayay in xal looga gaaro muranka biya xireenka An-Nahda, waxaana Masar xilligaas ay Caalamka ka codsatay in lasoo faragaliyo arintan.
Siyaasiyiin iyo Aqoonyahanno badan oo ka faallooda arimaha qaaradda Africa ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay ka go’antahay iney leexisato kimmiyada ugu badan ee biyaha webiga An-Niil, taas oo halis gelineysa nolosha malaayiin Masaari oo ku tiirsan webiga An-Niil.